Shumiskii Iker Casillas & Xaaskiisa 2010-kii Hadda Waa Eber – Garsoore Sports
Shumiskii Iker Casillas…
Maalmo ka hor waxaa soo baxday Xog hoose oo sheegeysay in ay kala tegeen ama uu dhamaaday Xiriirkii wada noolaanshiyo Ee Ka dhaxeeyey Goolhayaha Caalamiga ah Iker Casillas & Jaceylkiisii Sara Carbonero.
Labadooduba waxay sheegeen in uu go’ay wada noolaashiyihii ama Xiriirkoodii Jaceyl sidaa awgeedna ay carruurtooda awgeed iska war qabi doonaan.
Gabadhaan Sara Carbonero ayaa ah Saxafiyad islamarkaana ay ilaa 21 sano ushaqeeneysaa Telefishin Ciyaaraha ka faalooda oo la yiraahdo Telecinco.
Iker Casillas ayaa Dhunkaday 11 Sano ka hor Sara Carbonero xilli ay wareysi ka qaadeysay markii ay soo dhamaatay Finalkii Koobkii Adduunka 2010-kii lagu qabtay Dalka South Africa oo markaasi Spain 1-0 uga badisey Dalka Holland.
Dhamaadka Isbuucii hore ayaa la arkay iyagoo Saxafiyiin Xog raadis ah ay mikrafoon la daba galeen Gabadhaan Sara,si ay u ogaadaan Xanta Kala fogaanshaha Iker Casillas.
“Maanta waxaan nahay Lamaane Jaceyl xitaa hadii aan kala fognahay,waxa aan isku dhaarsanay ayaa ah in Carruurteena aysan Jaceylka Waalidnimo waayin ayey yiraahdeen Lamaanaha Wakhtiga Xiriirkooda dhamaaday”
Mid waliba waxa uu muujiyey inuu xushmad iyo Qadarin u hayo,waxaana ay qireen in Muddo ay wada noolaayeen Xasuustooda ka go’i doonin.
Chelsea Oo Udhaw Helitaanka Laacibka Erling Haaland